UVera Brezhnev kunye noKonstantin Meladze: iveli, iindaba zakutshanje. UBrzhnev noMaladze batshata, umtshato, isithombe
Ukutsho ngokuqinisekileyo, xa uthando lomqambi othandwayo kunye nobuhle obuhle beqela "VIA-Gra" luqale, akukho mntu unako. UConstantin Meladze noVera Brezhneva abasayi kuphawula malunga nolwalamano lwabo, bakhetha ukunandipha ulonwabo olude ulinde ngaphandle kwamehlo. Nangona kunjalo, iindaba zakutsha malunga nomtshato wesibini, abavela kwidolophu yaseNtaliyane yesifundazwe, abazange bamangaliswe kubahlobo babo okanye abalandeli, kuba amahlebezi malunga nenveli yomculi kunye ne-maestro beqhubeka ixesha elide.
Intlanganiso yokuqala phakathi kweBrezhnev kunye neMaladze ngumzuzu owonayo kakhulu
Ingqungquthela yokuba sele idibene phakathi kukaKonstantin Meladze noVera Brezhneva, kwavela ingqungquthela. NgoJanuwari 2003. UVera ngokwakhe watsho ukuba intlanganiso yokuqala kunye noKonstantin Meladze yayiyithuba elihle kakhulu kuye.
Intombazana yeza kukhwela, yathetha naye uDmitry Kostyuk - owayengumvelisi we "VIA-Gry." Ekunene kwintetho, uKonstantin Meladze wangena egumbini, wahlala ecaleni kweVera Galushka (uBrazhnev wayeyimbonakaliso yabonakala esele iqela) waza wambona ixesha elide ngaphandle kokuthetha igama elinye. Yiloo ndlela umculi wathetha ngayo ngento yokuqala yokumdibanisa kunye nomqambi ngo-2008 kwi-TV eyaziwayo iTerka Serduchka: Ngexesha lokuba uVera eVIA-Gre, uConstantine wayesele watshata noJan Sum iminyaka engama-9 ubudala, lo mbhangqwana wenyusa u-Alice. Ngo-2004, eso sibini sasinenye intombi-uLeya, kunye nonyaka kamva-unyana ogama linguValera ngokuhlonipha umntakwabo omncinci.
Bathi ngelo xesha, kwakunjalo ukuba uMaladze wayetshatile, wayeka abathandi, kwaye uVera wazama ukulibala ngeemvakalelo zakhe, esatshatile ngo-2006 umfokazi waseUkraine uMikhail Kiperman, owathi ngo-2009 wazala intombi uSara.
Ukholo - umzuliso kuphela weConstantine Meladze
Kwiinyanga ezithandathu emva komtshato, umculi ushiya ibhola ekuthandeni, ukuchaza isigqibo sakhe ngokukhathala nokunyamezela kwengqondo. Nangona kunjalo, emva kwexeshana, uVera udibana noKonstantin Meladze, onika uncedo lwakhe emsebenzini. Ingoma yokuqala "andiyidlale" iba yintlanzi, intsebenziswano phakathi komqambi kunye nomculi uqala kwakhona.
Utsalane "Uthando luya kulondoloza ihlabathi" kwaye "Ubomi bwenene" buhlala kwiiphakamthi zetshathi. Ngelo xesha, umqambi othandekayo uyazifihla ngokucacileyo ukuba zombini isicatshulwa nomculo kungowakhe. Kuze kube ngoku, umbhali wale ngoma unomnye u-Alexey Fitsich - inkohliso engamanga, apho phantsi kwayo, ekugqibeleni, ekugqibeleni wasebenza uConstantine. Umqambi uyaqhubeka nokudala izandi ezintsha, kunye nomsebenzi womculi ngokuqinisekileyo uya kunyuka.
Indlela uVera Brezhneva kunye noKonstantin Meladze baqhawule ngayo
Ngokukhawuleza, phambi kukaVera, utshintsho olubalulekileyo. Ngo-Oktobha 2012, inkwenkwezi ihlukanisa nomyeni wayo. Umtshato uqhawule, ungacacisi ubuhlobo kunye nokwahlukana kwepropati. Abantu abatshatileyo babengakhange bavakalise izizathu zokuhlukana kwabo, kodwa abanye abezindaba baxele ukuba ummeli-shishini waseMukraine waqala ukukrokrela umfazi kwiveli kunye noKonstantin Meladze. Izaziso zithi iPikerman ulungiselele ukubonwa ngokufihlakeleyo kwababini, kwaye waqinisekisa izigqibo zakhe. Ukugqiba ukungavakalisi ukunyaniseka kweengxelo, le ndoda yakhawuleza iqulunqa umtshato.
Kodwa kungekhona nje indoda yomculi okhankanya into ethile. Ngaphambili, uJana Meladze waqala ukuqagela malunga nencwadana yomyeni wakhe kunye nomdlali. Njengomntwana omncinci omncinane, le ntokazi yafunda ngokukhohlisa. Emva kokuba ebhaliwe oku ngenxa yentlekele ebubudlelwaneni, u-Yana wakwazi ukuxolela umyeni wakhe, kodwa emva kweminyaka embalwa kwenzeka konke kwakhona. Ukufumana intsapho yakhe, u-Yana Meladze wabiza uVera Brezhneva, kodwa waqinisekisa loo ntokazi ukuba ubuhlobo nomqambi kwakusebenza kunye nobungane kuphela.
Ngo-2013, uKonstantin Meladze wahlukanisa nomfazi wakhe, ehleli naye iminyaka engama-19, kwaye ekuqaleni komnyaka ozayo ipaparazzi yabona umvelisi kunye noVera Brezhnev kwenye yeevenkile zase-Kiev ngexesha lokubhiyozela usuku lokuzalwa komculi.
Le nyaniso ayinakuvusa naluphi na ukusola ukuba eso sibini asizange siye ekhaya kuVera. Ngexesha elilandelayo i-paparazzi yabona isibini kunye kunye nehlobo le-2014 kwintsimi yeziko lonyango "iLapino". Njengoko uyayazi, le ngenye yeeklinikhi ezithandwa kakhulu, apho ezininzi zeenkwenkwezi zazalwa. Kwimidiya, kwakukho intetho esondeleyo ukuba uVera Brezhnev ukhulelwe uKonstantin Meladze.
Enyanisweni, isikhungo se "Lapino" sathinteke kakhulu nguyise womculi, onguKonstantine noVera batyelela. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, umculi nomqambi baya kuJurmala kwi "New Wave". Ngelo xesha ipaparazzi yakwazi ukufumana ukuba isibini sasihlala kwelinye igumbi.
Kulindelekile ukumangaliswa: umtshato kaVera Brezhneva noConstantin Meladze
Nangona kubonakala ukuba i-press yavela ngokuphindaphindiweyo iifoto zazo ezidibeneyo kwindawo engasasebenzi, uMaladze noBrezhnev baqhubeka beqinisekisa bonke ukuba bangabangane abahle kuphela. Wonke umntu uyasetyenziswa kuloo ngxelo ukuba iindaba ezilindelekileyo, njengomtshato wesibini, zenzeke zingalindelekanga.
Iindaba zavela kwi dolophu encinane yaseForte dei Marmi, efumaneka elunxwemeni lolwandle lwaseTystan yaseTaliyane. Abathandi banquma ukwenza umtshato wabo ube yimfihlo, kodwa nase-Italy bafumene ipaparazzi. Kakade emva komhla, umtshato waziwa kwilizwe lakwabo leenkwenkwezi kubonga kumajelo aseNtaliyane.
Iindaba malunga nomtshato zakhuthaza yonke i-intanethi kwisithuba seSoviet. Ulwazi oluvela kwiTuscany luvele ngokoqobo kuyo yonke iprogram, kwaye ingxoxo ngabasebenzisi be-intanethi yeenkcukacha ezincinci zemibhiyozo ayizange iphele nangemva kweveki.
Ekubeni abasanda kutshata banakukwazi ukufihla iholide yabo, baphoqelelwa ngabameli ukuba baqinisekise i-accomp accomp.
Yonke inyaniso malunga nobomi bomntu we-actor Maxim Averin
Iintyatyambo zeJadi: i-Perennials Nerine
Yintoni enokuyenza ukugcina umbono ngexesha lokukhulelwa
Iindlebe ze-Makeup - ezitshisa ihlobo-2016
Imimic wrinkles: njani ukujongana nabo?
Amanxundu amnyama: izizathu kunye nokhokelo lwezenzo
Indlela yokuphuma kwidlo ye-buckwheat
I-Blepharoplasty yama-Asia amehlo
Pizza nge ham kunye ne-arugula
Indlela yokugcina ubudlelwane phakathi kobudlelwano
Ikhofi kunye neyeyi: inzuzo okanye ingozi
Eggplants e Korea
Ngaba ufuna ukwazi okungakumbi malunga ngesondo?